Nxiba i-iPhone X yakho kunye nemeko yesikhumba kaMujjo | IPhone iindaba
Nxiba i-iPhone X yakho kunye nemeko yesikhumba kaMujjo
ULuis Padilla | | Izixhobo ze-IP
Ukuziva kwimeko elungileyo yesikhumba kwi-iPhone yethu kubuyekeza ukufihla uyilo lwayo. Kuba kufuneka sibugubungele ubuhle bendalo befowuni yethu, ubuncinci inento ekufaneleyo ukuyibona nokuyichukumisa, kwaye ityala likaMujjo lenza njalo. Yenziwe ngesikhumba esihle kunye nemibala ngedayi yemifuno, yeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana iimeko ezisemthethweni zeApple, kwaye ngokoluvo lwam, iphezulu kumgangatho, ubuncinci ngokuchasene nokuchukumisa.
Ifumaneka ngemibala emine kwaye yenzelwe ngokukodwa ukuba ilingane njengeglavu kwi-iPhone X yethu entsha, Sele zifunyenwe kwiwebhusayithi esemthethweni kaMujjo ngexabiso eliphantsi kunamatyala asemthethweni e-Apple. Sizamile kwaye sikuxelela uluvo lwethu ukongeza ekuboniseni iifoto ukuze uzenzele.
Ityala likaMujjo le-iPhone X lenziwe ngesikhumba seprimiyamu, elingaphakathi linxibe eyona microfiber ikhusela umphezulu obuthathaka wentsimbi kunye neglasi yefowuni yakho. Amaqhosha agqunywe ngokugqibeleleyo kodwa agcina impendulo elungileyo xa ucinezelwe. Awuyi kuba nalo mvakalelo yokungazi ukuba ucofa iqhosha okanye cha. Ityala linemingxunya emibini kuphela: enye yekhamera kunye neyokutshintsha isimumu, kodwa njengophawu olucacileyo lokuba uMujjo unakekela zonke iinkcukacha zokugqibela, awuyi kuqaphela ukusikwa kolusu.
Njengayo nayiphi na imveliso esemgangathweni yesikhumba, ukuhamba kwexesha kuya kuyinika imeko ubuntu bayo, ngenxa yoko awuyi kutyhafa yiyo. Unayo kwakhona eyafumanekayo ngemibala eyahlukeneyo, ke ngoko unokukhetha oyithandayo ye-iPhone X yakho: luhlaza womnquma, mnyama, ngwevu nomdaka. Unenketho yokuthenga ityala ngeendawo zokuthenga ngetyala. Ixabiso lale meko intle yesikhumba yi- € 44,90 (€ 15 ngaphantsi kwetyala lika-Apple), kwaye ukuba uyayifuna ngamakhadi, € 49,90. Ungayithenga kwi- iwebhusayithi esemthethweni Ukusuka apho bathumela khona ngokusebenzayo kwihlabathi liphela (ukuya eSpain malunga ne- € 6 yeendleko zokuhambisa, simahla kwi-60 euros).
Kubalandeli bamatyala esikhumba, kuyakubanzima ukufumana elona tyala lingcono kuneli likaMujjo, elungiselelwe ngokukodwa ukuziqhelanisa ngokugqibeleleyo ne-iPhone X. Ngokuchukumisa okunomtsalane kunye nokuxhathisa okukhulu ekuhambeni kwexesha, nayiphi na imibala emine ekhoyo iya kunxiba i-iPhone inyanzelise. Ukuchukunyiswa kwamaqhosha kunye neenkcukacha zokuba ukusikwa kolusu akubonakali kwimingxunya yekhamera kunye nokutshintsha kwesimumu bubungqina bokuba uMujjo unike inkcukacha., uphawu olunamava amakhulu kwezi zixhobo kwaye esele sithethile nawe ngamanye amaxesha, kunye neemveliso ezinje ezi iiglavu zesikhumba ezintle okanye igubungela iMacBook. Ngexabiso elisezantsi kunamatyala e-Apple, zezona zilungileyo zinokubakho kumgangatho kunye nexabiso.
Idayi yeNkulumbuso kunye nedayi yemifuno
Ulungelelwaniso lwangaphakathi lwe-microfiche
Ukuxhathisa ekuhambeni kwexesha
Ukuchukumisa okuhle kwamaqhosha
Iyafumaneka kunye nangaphandle kwesiphatho sekhadi
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Nxiba i-iPhone X yakho kunye nemeko yesikhumba kaMujjo
Isigubungelo esixabiseke ngokwenene! Kwaye kubonakala ngathi ayizukunika ivolumu eyongezelelweyo kakhulu kumzimba we-iPhone.
I-Coicido kuba ilusizi ukuba ayigubungeli icandelo elisezantsi kuba kungqinwa ukuba isinyithi sisamkeli esihle sokwenzakala okuncinci!
Ndilindele uphononongo lwakho lweli tyala! 😉
Isithuba esiphantsi kwekhibhodi ye-iPhone X sivelisa izikhalazo ezininzi
Ukuba sinciphisa ukhuseleko kwi-ID yobuso ukuvula kungakhawuleza